Ogaden News Agency (ONA) – Addiss Ababa oo Muslimiin Badan Sixun Loogu Waxyeeleeyay Salaadii Jumcaha Kadib.
Addiss Ababa oo Muslimiin Badan Sixun Loogu Waxyeeleeyay Salaadii Jumcaha Kadib.
Posted by ONA Admin	/ July 18, 2014
Waxaa Masjidka wayne ee loo yaqaano Jaamicu- Anwar kaasoo kuyaala badhtamaha magaalada Addiss Ababa iskugu yimid muslimiin farabadan oo doonayay ineey Salaada Jumcaha kutukadaan masjidka. Muslimiintan waxaa weerar culus kusoo qaaday ciidamada booliska ah ee ka amar qaata dawlad kusheegta ay utaliso kooxda Wayaanaha/TPLF.
Ciidankan oo aad uhubaysnaa ayaa kubilaabay garaac iyo falal kale oo banii,aadamnimada kadhan ah Muslimiin masjidka Anwar kucibaadaysanaysay oo sinabadgaliyo ah waajibaadkooda ugudanayay wakhti lagu jiro tobankii bari ee bisha barakaysan ee Ramadaan udambaysay. Hawlgalkan ayaa dhaliyay dhaawac iyo dhimasho.
Wararku waxay intaas kudarayaan in tiro badan oo muslimiinta kamid ah dhaawacyo iyo xadgudubyo kala duwan kasoo gaadheen dhibaatadii loogaystay taasoo markii dambe isu badashay iska hor imaad udhexeeya ciidanka wayaanaha iyo muslimiinta. Sidoo kale waxaan dhibaatadan kabadbaadin ooy saamaysay gabdhaha muslimaadka ah kuwaasoo uyimid Masjidka Anwar ineey Salaada Jumcaha kutukadaan. Waxaa lasheegayaa inuu qof kaliya kudhintay iska hor,imaadkii Masjidka Anwar kadhacay.
Muslimiinta kudhaqan Itoobiya gaar ahaan magaalada Addiss Ababa ayay dhibaatooyin badani kasoo gaadheen ciidamadan amaanka ee Itoobiya. Waxaa jeelasha kabuuxa culimo iyo dad shacab ah oo kamid ah muslimiinta Addiss Ababa. Waxaa kale oo isla dhacdooyinkan kunafwaayay boqolaal muslimiin ah oon waxba galabsanin.
Wadanka Itoobiya ayaa waxaa kajirta fawdo iyo cadaalad darri aan lasoo koobi Karin taasoo umuuqata in lagaadhay dhamaadkii nidaamka Wayaanuhu hormuudka u ahaa ee EPRDF/TPLF. Lama saadaalin karo waxay kudhamaan doonto xiisadahan isdaba jooga ah ee Itoobiya kasocda gaar ahaan caasimada Addiss Ababa oo noqotay meel aan xasiloonayn bilihii lasoo dhaafay amnigeeduna gacanta kasii baxayo maalinba maalinta kadambaysa.